Siyaabaha kala duwan ee lammaaneyaasha u wada nol yihiin | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Sida qoys loo dhisto iyo sida carruur dalka Iswiidhan loogu korsado / Siyaabaha kala duwan ee lammaaneyaasha u wada nol yihiin
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 12 11 2021
Hay'addaha dalka Iswiidan weey diidi karaan nikaax ka dhacay dal shisheeye ah, haddii mid ka mid ah labada qof lagu qasbay guurkasi.
Nikaaxa waa dhacdoonka laba qof isku guursanayaan. Nikaaxa waxuu noqon karaa mid diimeed ama mid madani ah. Sida uu nikaaxa u noqdo mid sax ah, waa in qofka isku nikaaxinaayo uu rukhsad ka heeystaa hey'ad dowladeed. Wuxuu noqon karaa qof wadaad masiixi ah, imaam ama xirfadiisa ah in uu dadka isku nikaaxo. Nikaaxa madaniga ah waxa sameeyo qof maamulka gobolka uu xil saaray. Nikaaxa madaniga ah waa dhacdo aan lug ku laheeyn diin. Haddii nikaxa lagu fulinaayo hab diimeed oo qofka isku nikaxinaayo yahay qof aan rukhsad uu laheeyn, hadaba nikaaxas ma ahan mid sharci ahaan uu jiro. Si nikaaxu uu noqdo mid sharci ahaan uu jiro waxaa shardi ah oo kale nikaaxa madaniga ah.
Haddii aad wadajir u dalbateen inaad isfurtaan oo aydaan carruur haysan, waxay maxkamaddu go'aan arrintiina uga gaaraysaa sida ugu dakhsida badan. Haddii aad haysataan carruur ka yar 16 sano ama midkiina rabin furtaanka, waxaa la idin siinayaa wakhti ka soo fiirsasho ah. Taasi macnaheeda ah waxaa weeyaan inaad wakhtigaas kaga soo fakirtaan arrinta. Wakhtiga ka soo fiirsashada ugu yaraan waa lix billood, ugu badnaanna waa hal sano.
Haddii lixdaas billood kaddib aad weli doonayso furitaankii, waa in aad adigu la xiriirto maxkamadda degmada. Taas waxaa la yiraahdaa hirgelinta furitaanka. Haddii aadan maxkamadda warqad u dirin aadna ka codsan fulinta codsigii furitaanka, waxay maxkamadda ciribtiraysa codsigaagii. Haddii maxkamadda ay ka shakiso in guurku uu markiisa horeba ahaa mid qofka la qasbay, waxay maxkamadda xaaladaas ka soo fiirsasho la'aan go'aaminaysa furitaan.
Xannaanaynta carruurta waxay tahay xuquuqda iyo waajibaadka saaran qofka xilhayeha xannaanadda oo badanaa ah waalidka. Taasi mecnaheed waxeey tahay in xananeeynta caruurta aad ku leedahay xuquuq iyo waajibaad ku saaran. Carruurta waxay xaq ku leeyihiin xannaanyn inta ay ka gaarayaan da'da 18 sano. Waxaa ku saaran waajib masruufid illaa uu ilmuhu ka gaarayo 21 sano waa haddii uu dhigto dugsi sare.
Xannaanaynta wadaagan waxaa loola jeeda in waalidiinta labadoodaba mas'uul ka yihiin carruurtooda. Waa in si wadajir ah u go'aamiyaan arrimaha carruutooda khuseeyso. Labada waalidba waxaa saaran isku waajibaad xitaa haddii laba waalid aysan isla wada nolayn. Qofka ah xilhayeha xannaanadda cunugga wuxuu xaq ku leeyahay in warbixin carruurtiisa ku saasban la siiyo. Macneheeda waxay tahay in aad xaq uu lee dahay in waxii caruurtaada ku saabsan ku soo wargaliyaan maamulka dugsiga xannaanadda, dugsiyada caadiga, xarumaha daryeel-caafimaadeedka, maamulka adeegga bulshada, booliska iyo hay'adaha.